Ikhephu cocktail - iresiphi
Iiclove zezona zinongo zithandwa kakhulu kwihlabathi. Ukusetyenziswa kwayo ikakhulu kunxulunyaniswa nenyama kunye neentlanzi izitya. Kunzima ukucinga ukuthekisa ngaphandle kwale spice.
Umzekelo, amaJiphutha enza intsimbi yomqala eyenziwe kukutya okuqholiweyo aze ahombise abafileyo ngayo. Kwaye e-China, inkundla yayinokufika ku-Emperor kuphela xa ihlafuna i-clove.
ICarnation inezinto ezichasayo kunye nokudambisa iintlungu. Kwakukholelwa ukuba intsimbi yomqala ingathintela isibetho endlwini, kwaye ukubilisa amagqabi kunokuyisusa ikholera.
Kumazwe aseAsia nawama-Arabhu, ii-clove ziyongezwa kwizitya zemifuno, iziselo kunye neelekese. Kwilizwe labo e-Indonesia, eMoluccas, ii-clove zongezwa kwicuba. Ivumba elimnandi lala masigare ligcwalisa iivenkile kunye namakhaya e-Indonesia.
Ngoncedo lwee-clove, i-liqueurs ezikrakra zesisu, iziselo ezishushu ngewayini, i-punch, compotes kunye nejusi yeziqhamo. AmaHindu, asebenzisa ii-clove njengokuthomalalisa iintlungu, aqinisekile ukuba ukusetyenziswa kwesi siqholo rhoqo akuyi kuphucula imeko kuphela, kodwa kuya kukonyusa nomsebenzi wesondo. Ndingathanda ukukunika iziselo ezinxilisayo kunye nokongezwa kwee-clove.
Ukukhanya kwenyanga kweCocktail
Hlanganisa ama-250 ml wamanzi kunye nelitha yewayini emhlophe etafileni, yongeza ii-clove ezimbalwa apho kwaye ubilise.
Mash ezimbini izikhupha zamaqanda ezine ezinezipuni zeswekile kude kube mhlophe. Beka ubunzima obangela ukushisa okuphantsi.
Ukuqhubeka ushukumisa, uthele iwayini eshushu ngaphandle kokususa kubushushu kude kube yifom yefom. Musa ukuzisa kumathumba! Iibhiskithi zilungile kule cocktail.
I-cocktail ngee-clove "Ubusika Mojito"
I-cocktail emnandi onokuyilungiselela ngokulula xa uhleli ekhaya. Kwanele ukulungiselela iti ye-mint kwangaphambili, apho uza kubilisa khona ii-clove ezimbalwa.
Emva koko yongeza ubusi, iswekile (ukunambitha) kwiti, uthele iramu. Ungayihombisa i-cocktail yasebusika ye-Mojito ngamagqabi e-mint.
I-Mulled classic yeklasi
Thela ii-clove (iziqwenga ezi-6-7) kwiTurk kunye nenutmeg ukunambitha. Thela isinye kwisithathu seglasi yamanzi kwiTurk. Bilisa. Bilisa umzuzu omnye kwaye ushiye imizuzu eli-10.
Fudumeza ibhotile yewayini ebomvu epanini. Thela imixholo yeTurkey epanini. Kwangelo xesha, yongeza icephe elinye leswekile.
I-cocktail engekho utywala kunye nee-clove "ngokuhlwa e-Edelweiss"
Mash amancinci amnyama, yongeza i-30 ml yesiraphu ye-almond, 20 ml yejamthorn jam, 30 g ye-blackberry puree, yongeza i-1 g ye-chili pepper, ii-clove ezimbalwa, intonga yesinamoni kunye ne-100 ml yamanzi. Fudumeza konke oku ngaphandle kokubilisa.
Imbali yesi siselo igxile kumabali eHemingway malunga nebha esezintabeni zeAlpine. Iphupha labemi lalikukufika kwindawo yabo abayithandayo "iEdelweiss" ukonwabela isiselo esishushu emva kwexesha elichithwe kwisking.
Behleli phambi kweziko, bayalela i-cocktail kunye nee-clove, bajonga umlilo kwaye bakhumbula awona maxesha amnandi obomi.
I-Cocktail "i-Aperol-syringe" - ulutsha olunomdla oluhamba ngesiselo sehlobo
UJacob Bond we-cocktail-iziselo ezithandayo zeqhawe le-movie
Uyenza njani i-gin kunye ne-tonic cocktail
Cocktail utywala cocktails - iiresiphi
Edlulileyo Konke malunga nokuqubha ukunciphisa umzimba
Okulandelayo Kufuneka wenze ntoni nge-offal
Imibuzo ye-61 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-4,854.